धन्वन्तरी जयन्तीमा देशभर राष्ट्रिय आरोग्य दिवस मनाइँदै – Health Post Nepal
२०७६ कार्तिक ९ गते १५:२९
आज (शनिबार) देशभर धन्वन्तरी जयन्ती तथा राष्ट्रिय अरोग्य दिवस मनाइँदै छ । चिकित्सापद्धतिका प्रवर्तक देवका रूपमा पुजिने धन्वन्तरीको उत्पत्ति दिनका रूपमा प्रत्येक वर्ष कार्तिककृष्ण त्रयोदशीका दिन धन्वन्तरी दिवस मनाउँदै आइएको छ । यसै दिनलाई सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका रूपमा मनाइन्छ । देशभरका आयुर्वेदकर्मी र त्यसका अनुसरणकर्ता यतिवेला धन्वन्तरी जयन्ती मनाइरहेका छन् ।
धन्वन्तरी विश्वकै प्राचीनतम चिकित्सापद्धति आयुर्वेदका प्रणेता हुन् । आयुर्वेदप्रेमीहरू स्वस्थ रहन र रोग निराकरण गर्न धन्वन्तरीलाई सम्झने गर्छन् । धन्वन्तरी र आयुर्वेदका सबैभन्दा बढी अनुयायी छिमेकी देश भारतमा छन् । नेपालमा वि.सं. १९७४ मा आयुर्वेद चिकित्सा क्याम्पस, नरदेवी स्थापना भएपछि धन्वन्तरी जयन्ती मनाउन थालिएको हो । धन्वन्तरी जयन्तीकै दिनलाई ०५६ सालदेखि आयुर्वेदकर्मी तथा अनुसरणकर्ताले राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन् ।
धन्वन्तरी विश्वकै प्राचीनतम चिकित्सापद्धति आयुर्वेदका प्रणेता हुन् । आयुर्वेदप्रेमीहरू स्वस्थ रहन र रोग निराकरण गर्न धन्वन्तरीलाई सम्झने गर्छन् । पछिल्लो समय नसर्ने रोग चिकित्साविज्ञानका लागि प्रमुख चुनौती बनेसँगै नेपाल र भारतमा मात्र नभएर समग्र विश्वमै योग तथा आयुर्वेदप्रति आकर्षण बढ्दो छ ।
हालैको स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार मृत्युको प्रमुख कारणमा हृदयरोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, श्वासप्रश्वास, मिर्गौलारोग, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोग छन् । यसको नियन्त्रण व्यक्ति र समाजको जीवनशैलीमा स्वस्थकर परिवर्तनबाट मात्र सम्भव छ । योग तथा आयुर्वेद चिकित्सापद्धतिको व्यावहारिक अनुसरण नै नसर्ने रोगबाट बच्ने सर्वोत्तम उपाय भएको समग्र विश्वले स्विकारिसकेको छ । यस्तोमा नेपाल सरकार र सरोकारवाता पक्षहरूले नसर्ने रोगको रोकथाम र उपचारका निमित्त आयुर्वेद र अन्य उपचार पद्धितलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएका छन् ।
धन्वन्तरी जयन्तीका अवसरमा शनिबार बिहानैदेखि देशका विभिन्न स्थानमा आयोग्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । आयुर्वेदकर्मी, विद्यार्थी तथा यस पद्धतिका अंगीकर्ताले धन्वन्तरीको विधिवत् पूजा गरेका छन् । नरदेवी क्याम्पस, सिंहदरबार वैद्यखाना तथा सामाखुसीस्थित धन्वन्तरी अस्पतालमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी आयुर्वेदको महत्त्व जनमानसमा पुर्याउने कोसिस गरिएको छ । पछिल्लो समय नसर्ने रोग चिकित्सा विज्ञानका लागि प्रमुख चुनौती बनेसँगै नेपाल र भारतमा मात्र नभएर समग्र विश्वमै योग तथा आयुर्वेदप्रति आकर्षण बढ्दो छ ।
नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले धन्वन्तरी दिवसमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले आयुर्वेद चिकित्सापद्धतिको महत्त्व बढ्दै गएको बताए । अस्पतालले आरोग्य दिवसको अवसर पारेर शनिबार नै रक्तदान कार्यक्रमसमेत सम्पन्न गरेको छ ।
राष्ट्रिय आरोग्य दिवस